Panama: Hofoanana ny lalàna manova ny fehezan-dalanan’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2011 11:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, Français, Italiano, Español
Ny marainan'ny 3 Martsa, nanome toky ny Filoha Ricardo Martinelli fa hanafoana ny lalàna 8, izay nanova ny fehezan-dalàna mikasika ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany any Panama. Mitatitra i Hora Cero [es]:
Ny Filohan'i Panama, Ricardo Martinelli dia niteny ny Alakamisy fa, hanafoana ny lalàna mikasika ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izay notoherin'ireo Indiana an'arivony nandritra ireo firotsahana an-dalambe sy ny fanakanana ny arabe nandritra ny herinandro vitsivitsy tany amin'ny faritr'i Chiriqui sy Veraguas.
Voarain'ireo Panamaniana tamin-kafaliana ny vaovao izay nijery ny fanovana ity fehezan-dalàna ity ho fanapotehina ny tontolo iainana. Nipoitra avy hatrany tany amin'ireo tambanjotra sosialy ireo fihetsehim-po.
Nizara ny fanambarana ity fanafoanana ity tao amin'ny kaonty Twitterany ny Filoha Ricardo Martinelli (@rmartinelli), nanambara fa hiaino ny vahoakany foana izy:
Hofoanana mandritra ny Fivoriana manokana ny lalàna 8, ny Filoha tahaka ahy dia mihaino foana ny vahoakany
Juan Carlos Navarro (@juancanavarro), nanoratra tao amin'ny Twittern'ny ben'ny tanànan'ny renivohitr'i Panama taloha:
tsy mila toeram-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany an-kalamanjana i Panama. Ankehitriny dia andao hiaro ny tontolo iainana, hampahery ny ANAM [Ny Manam-pahefana Nasionaly momba ny Tontolo iainana] ary hiaino ny vahoaka
Daniel A. Robleto A. (@danielrobleto) dia misaotra ny vahoaka madinika izay niady ny fanafoanana ity lalàna ity:
Voalaza ny fanafoanana ny lalàna 8 izay manome alalana ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ankalamanjana any Panama. Misaotra anareo rahalahy Ngäbe, ny filofosanareo no nahatontosa izao.
Niara-nizotra tany amin'ny lalàn-dehiben'ny morontsiraka ireo mpianatra, vahoaka madinika, ireo vondrona mpiaro ny zom-bahoaka sy ny tontolo iainana mba hanao fihetsiketsehina manohatra ireo fanovana ny lalànan'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ny 20 Febroary. Sary nahazoana copyright tao amin'ny Demotix nalain'i Guillermo Johnson
Mampiseho ny hafaliany tamin'ny fanomezan-toky amin'ny fanovana i Yitzhak Polanco M. (@yitzpolanco):
Tena Faly!!! Fanovana tanteraka ny LALANA 8!! TSIA AMIN'NY FITRANDRAHANA HARENA AN-KIBON'NY TANY aty PANAMA!!
Nanako ireo tenin'ny filoha i Ana Perezmackenzie (@peresmackenzie):
Niteny i Martinelli “tsy tia ireo lavaka fihadiana harena an-kibon'ny tany, mpandavaka, na ny fitrandrahana aho” avoahy ivelan'i Panama izy ireo, aoka ny VOLAMENAN'i Panama ho maitso!
Nampahatsiaro ny mpanaraka azy i C. Adrian Martínez (@cadrianmartinez) fa ny fanomezan-toky hanafoana dia tsy voatery midika ho tsy hisy intsony ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ankalamanjana any Panama:
Tsy fanekena ny [firenena] ho tsy hisy vy/fitrandrahana harena an-kibon'ny tany malalaka ny fanafoanana ny lalàna 8. Ankehitriny dia mila miantoka izany isika.